Ezekiel 26 (Myanmar/Burmese: Judson (1835)); Apocalypse Revealed (Rogers translation) #774
1 သက္ကရာဇ်ဆယ်တခု၊ ပဌမတရက်နေ့တွင်၊ ထာဝရဘုရားဘုရား၏နှုတ်ကပတ်တော်သည် ငါ့ဆီသို့ ရောက် လလာ၍၊
2 အချင်းလူသားသား၊ တုရုမြို့တုရုမြို့က၊ အေ့ဟေ၊ တိုင်တိုင်းနိုင်ငံ တို့၏ တံခါးဖြစ်သော ယေရုရှလင်မြို့ယေရုရှလင်မြို့သည် ပျက်စီးသည် ဖြစ်၍၊ ငါ့လက်သို့ ရောက်လိမ့်မည်။ ထိုမြို့ဆိတ်ညံသော ကြောင့် ငါစည်ပင်လိမ့်မည်ဟု ယေရုရှလင်မြို့ယေရုရှလင်မြို့တဘက်၌ ဆိုမိသောကြောင့်၊
3 အရှင်ထထာဝရဘုရားဘုရားမိန့်တော်မူသည်ကား၊ အိုတုရုမြို့တုရုမြို့၊ သင့်တဘက်၌ ငါနေ၏။ သမုဒ္ဒရာလှိုင်းတပိုး တက်တက်သကဲ့သို့၊ လူအမျိုးမျိုးလူအမျိုးမျိုးတို့သည် သင်ကိုတက်တက်၍ တိုက်စေမည်။
4 သူတို့သည် တုရုမြို့တုရုမြို့ရိုးကိုဖျက်၍ ပြအိုးတို့ကို ဖြိုချကြလိမ့်မည်။ မြေမှုန့်ကို ငါခြစ်ခွာ၍ ရှင်းလင်းသောကျောက်ကျောက် ကဲ့သို့ ဖြစ်စေမည်။
5 ပင်လယ်ပင်လယ်အလယ်အလယ်၌ ပိုက်ကွန်လှန်းရာ အရပ် ဖြစ်လိမ့်မည်။ ငါပြောပြီဟု အရှင်ထာဝရဘုရားဘုရားမိန့်တော် မူ၏။ လူမျိုးလုယူရာဖြစ်ရလိမ့်မည်။
6 လယ်ပြင်၌ရှိသော သမီးတို့သမီးတို့သည် ထားဖြင့် သေ၍၊ ငါသည် ထာဝရဘုရားဘုရားဖြစ်ကြောင်းကို သိသိရကြ လိမ့်မည်ဟု မိန့်တော်မူ၏။
7 တဖန် အရှင်ထာဝရဘုရားဘုရား မိန့်တော်မူသည် ကား၊ ဘုရင်တို့၏ဘုရင်တည်းဟူသော မြောက်မျက်နှာရှင် ဘုရင်နေဗုခဒ်နေဇာကို၊ မြင်းမြင်းထားရထား၊ မြင်းစီးသူရဲမြင်းစီးသူရဲ၊ လူများအလုံးအရင်းနှင့်တကွ တုရုမြို့တုရုမြို့သို့ ငါဆောင်ခဲ့ မည်။
8 သူသည်လယ်ပြင်၌ရှိသော သင်၏သားသမီးတို့သမီးတို့ကို ထားနှင့်သတ်သတ်လိမ့်မည်။ သင့်တလက်၌ ရဲတိုက်ကိုတည်၍ မြေရိုးကိုဖို့ပြီးလျှင်၊ ဒိုင်းလွှားတို့ကို ချီကာလိမ့်မည်။
9 သင်၏မြို့ရိုးတဘက်တချက်၊ ဝက်ခွတိုင်၌ တုံးတို့ကို ဆွဲထား၍ သင်၏ရဲတိုက်ရဲတိုက်တို့ကို တူးရွင်းနှင့် ဖြိုချလိမ့်မည်။
10 မြင်းများမြင်းများသောကြောင့် မြေမှုန့်သည် သင့်ကို ဖုံးလွှမ်းလိမ့်မည်။ တိုက်ဖျက်သော မြို့မြို့ထဲသို့ဝင်ဝင်တတ် သကဲ့သို့ သင်၏မြို့မြို့တံခါးသို့ ဝင်သောဝင်သောအခါ၊ လှည်းရထား မျိုးမြည်သံ၊ မြင်းစီးသူရဲမြင်းစီးသူရဲတို့ အသံအသံကြောင့် သင်၏မြို့မြို့ရိုး လှုပ်လှုပ်ရှားလိမ့်မည်။
11 မြင်းမြင်းခွာခွာတို့ဖြင့် သင်၏လမ်းရှိသမျှတို့ကို နင်း လျက်၊ သင်၏လူတို့ကို ထားနှင့်သတ်သတ်၍၊ သင်ခိုလှုံစရာ ရုပ်တုဆင်းတုတို့သည် မြေမြေတိုင်အောင် ပြိုလဲကြလိမ့်မည်။
12 သင်၏ဥစ္စာကို လုယူ၍သင်၏ကုန်များကိုလည်း သိမ်းယူကြလိမ့်မည်။ သင်၏အုတ်ထရံတို့ကို ဖြို၍ဘုံဗိမာန် တို့ကို ဖျက်ပြီးလျှင်၊ သင်၏ ကျောက်၊ သစ်သားသစ်သား၊ မြေတို့ကို ရေရေထဲမှာ ချပစ်ကြလိမ့်မည်။
13 သင်ဆိုသောသီချင်းသီချင်းသံကို ငါငြိမ်းစေ၍၊ သင်တီး သော စောင်းသံကို နောက်တဖန် အဘယ်သူမျှမကြားကြားရ။
14 သင်သည် ရှင်းလင်းသောကျောက်ကျောက်ကဲ့သို့ ငိုက်ကွန်လှန်ရာ အရပ်ဖြစ်ရလိမ့်မည်။ နောက်တဖန် မတည်ပြန်ရ။ ငါထာဝရဘုရားဘုရားပြောပြီဟု အရှင်ထာဝရ ဘုရားဘုရားမိန့်တော်မူ၏။
15 တုရုမြို့တုရုမြို့ကို ရည်မှတ်၍ အရှင်ထာဝရဘုရားဘုရား မိန့်တော်မူသည်ကား၊ သင့်အလယ်အလယ်၌ ကြီးစွာသော လုပ်ကြံခြင်း အမှုဖြစ်၍၊ ထိခိုက်သော သူတို့သည် အော်ဟစ်သောအခါ၊ သင်ပြိုလဲခြင်း အသံအသံကြောင့် တကျွန်းတနိုင်ငံတကျွန်းတနိုင်ငံ အရပ်တို့သည် တုန်လှုပ်တုန်လှုပ်ကြလိမ့်မည်။
16 သမုဒ္ဒရာမင်းအပေါင်းတို့သည် ရာဇပလ္လင်ရာဇပလ္လင်ပေါ် က ဆင်း၍၊ အင်္ကျီတော်ကို၎င်း၊ ချယ်လှယ်သော အဝတ်အဝတ် တော်ကို၎င်း၊ ချွတ်ချွတ်ပယ်ပြီးမှ၊ တုန်လှုပ်ခြင်းအဝတ်အဝတ်ကို ဝတ်လျက်၊ မြေမြေပေါ်၌ ထိုင်ထိုင်လျက် ခဏခဏတုန်လှုပ်၍၊ သင်၏အမှုကြောင့် မိန်းမောတွေဝေကြလိမ့်မည်။
17 သူတို့ကလည်း၊ အိုကျော်စောသောမြို့မြို့၊ ပင်လယ်ပင်လယ် သားနေနေ၍ ပင်လယ်ပင်လယ်၌ အားကြီးသော မြို့မြို့၊ ပင်လယ်ပင်လယ်သား အပေါင်းတို့ ရိုသေဘွယ်သော မြို့မြို့သားနှင့် ပြည့်စုံသော မြို့မြို့၊ သင်သည် အလွန်ပျက်စီးလေပြီတကားဟု သင့်အား ဆိုလျက်၊ သင့်အတွက် မြည်တမ်းမြည်တမ်းကြလိမ့်မည်။
18 သင်ပြိုလဲသောနေ့နေ့တွင် တကျွန်းတနိုင်ငံတကျွန်းတနိုင်ငံ အရပ် တို့သည် တုန်လှုပ်၍၊ သင်ကွယ်ပျောက်သောကြောင့် ပင်လယ်ပင်လယ်၌ရှိသော ကျွန်းများကျွန်းများတို့သည် ထိတ်လန့်ကြလိမ့် မည်။
19 အရှင်ထာဝရဘုရားဘုရား မိန့်တော်မူသည်ကား၊ လူမနေနေသောမြို့မြို့ကဲ့သို့ ငါသည် သင့်ကိုဆိတ်ညံစေလျက်၊ ပင်လယ်ကိုသင့်အပေါ်သို့ ဆောင်ခဲ့၍၊ လှိုင်းတံပိုးတို့သည် သင့်ကိုလွှမ်းမိုးသောအခါ၊
20 ရှေးလူဟောင်းတို့ နေနေရာမြေမြေတွင်းတွင်းထဲသို့ ဆင်း သော သူတို့နှင့်အတူ သင့်ကိုငါ နှိမ့်ချ၍၊ သင်၌လူမနေနေစေ ခြင်းငှါ မြေမြေတွင်းတွင်းထဲသို့ဆင်းသောသူတို့နှင့်အတူ၊ ရှေး ကာလမှစ၍ဆိတ်ညံရာအရပ်၊ မြေမြေအောက်အရပ်တို့၌ ငါချထားမည်။ ထိုအခါ အသက်ရှင်သောသူတို့၏ နေနေရာ ၌ ငါ့ဘုန်းကို ငါဖွင့်မည်။
21 သင်မူကား၊ ကြောက်မက်ဘွယ်သော အရာဖြစ် ၍၊ နောက်တဖန် အဘယ်သူမျှရှာ၍ မတွေ့နိုင်အောင်၊ ပျောက်ကုန်ရာသို့ရောက်လိမ့်မည်ဟု အရှင်ထာဝရထာဝရ ဘုရားဘုရားမိန့်တော်မူ၏။
The Inner Meaning of the Prophets and Psalms 149
Arcana Coelestia 290, 490, 643, 756, 790, 1306, 2336, ...2576, 2799, 3727, 4137, 4728, 5321, 5376, 6419, 7090, 7729, 8278, 9688, 9755, 9825, 10227, 10248, 10643
Apocalypse Revealed 206, 285, 298, 328, 437, 501, 774
Apocalypse Explained 208, 275, 304, 323, 326, 355, 387, ...395, 406, 411, 538, 652, 687, 988, 1145
Scriptural Confirmations 9, 74
Psalms 37:36, 40:16
Jeremiah 25:22, 49:21, 51:42
Ezekiel 8:1, 19:1, 25:3, 27:27, 28:1, 29:18, 31:15, 32:2, 10, 18, 23, 27
Revelation 18:10, 19, 21, 22
'Tyre,' as in Ezekiel 27:13-14, represents people with knowledge of celestial and spiritual things.
'Towers,' as in Psalms 48:12, signify the interior truths which defend the aspects of love and charity. In the opposite sense, they denote the interiors...
'A hoof' signifies truth in the ultimate degree, or sensory truth. 'The hooves of horses' signify the lowest intellectual principles. 'The hooves of the horses,'...
In the ancient and Jewish churches, 'songs' were prophesies about the Lord, especially His coming in the world, subjugation of the diabolical spirits, and liberation...
Islands' signify the natural mind, or the natural human, regarding truths and falsities. People who are steeped in the internal sense of the Word, such...
An island,' in an abstract sense, signifies the truth of faith.
'To tremble,' as in Jeremiah 10:10, relates to the church when falsities are believed and called truths.
As in Micah 1:8, 'to be stripped' signifies being without goods, and 'to be naked' signifies being without truths.
The children of Israel represent 'lamentation' by various things which signified some evil of the church among them for which they were punished. When they...
A pit,' or 'well which has no water,' as in Jeremiah 2:13, signifies doctrines which have no truths.
Translation: Coulson (1970) Rogers (2007) Whitehead (1928) original (1766) Apocalyps Onthuld Апокалипсис открытый (pdf) L'Apocalypse Révélée (Le Boys des Guays traduction Tradução Figueiredo (1987) 정인보 번역
Apocalypse Revealed #774
774. "Every kind of thyine wood, 1 every kind of ivory vessel." This symbolically means that these Roman Catholics no longer have these because they do not have any of the natural goods and truths to which such things correspond.
This statement is similar to the ones explained in nos. 772 and 773 above, the only difference being that the valuables named first mean spiritual goods and truths (as explained in no. 772 above), and that those named second mean celestial goods and truths (as explained just above in no. 773), while those named now - thyine wood and ivory vessel - mean natural goods and truths.
(References: Apocalypse Revealed 772-773; Revelation 18:12)
 To explain: There are three degrees of wisdom and love, and so three degrees of truth and goodness. We call the first degree celestial, the second spiritual, and the third natural. These three degrees are present from birth in every person, and they are present in general also in heaven and in the church. Because of this there are three heavens,ahighest one, an intermediate one, andalowest one, altogether distinct from each other in accordance with these degrees. The same is true of the Lord's church on earth. But this is not the place to explain the nature of the church with people in the celestial degree, with people in the spiritual degree, and with people in the natural degree. See instead what we said about them in Angelic Wisdom Regarding Divine Love and Wisdom, Part Three, where we dealt with degrees. Here we will say only that in the case of people coming from Babylon, they have no spiritual goods and truths, no celestial goods and truths, and not even any natural goods and truths.
Spiritual goods and truths are mentioned first, because many of those coming from Babylon can be spiritual, provided they hold the Word holy at heart, as they do with the mouth. But they cannot become celestial, because they do not turn to the Lord, but turn to people living and dead and worship them. It is for this reason that celestial goods and truths are mentioned second.
 Thyine wood symbolizes natural good because wood in the Word symbolizes goodness, and stone truth, and thyine wood derives its name fromaword meaning two, and the number two also symbolizes goodness.
The good symbolized is natural good, because wood is notavaluable material like gold, silver, precious stones, pearls, fine linen, purple, silk and scarlet. The same is true of stone. The case is similar with ivory, which symbolizes natural truth. Ivory symbolizes natural truth because it is white and can be polished, and because it protrudes from the mouth of an elephant and also constitutes its might. In order for ivory to symbolize the natural truth of the goodness symbolized by thyine wood, the text specifiesavessel of ivory, asavessel symbolizes something that contains, here truth that contains good.
 That wood symbolizes goodness can be seen to some extent from the following considerations: That the bitter waters at Marah were made sweet by casting in something wooden (Exodus 15:25). That the tables of stone on which the Law was written were placed in an ark made of acacia wood (Exodus 25:10-16). That the Temple in Jerusalem was roofed with wood and paneled inside with wood (1 Kings 6:9, 15). And that the altar in the wilderness was made of wood (Exodus 27:1, 6).
It can be seen to some extent also from the following:
...the stone will cry out from the wall, and the beam from the wood answers it. (Habakkuk 2:11)
They will plunder your riches and pillage your merchandise..., and they will cast your stones and your timber... into the midst of the sea. (Ezekiel 26:12)
The prophet Ezekiel was told to takeapiece of wood and write on it the names of Judah and the children of Israel, and also on another piece of wood the names of Joseph and Ephraim; and that the Lord Jehovih would make them into one piece of wood (Ezekiel 37:16, 19).
We drink our water in exchange for silver, and our wood comes ataprice. (Lamentations 5:4)
If someone goes with his neighbor intoaforest..., and the ax head (falls) from the wooden handle...(onto) his neighbor so that he dies, he shall flee to (a city of refuge). (Deuteronomy 19:5)
The latter is said because wood symbolizes goodness, and so because the person did not kill his neighbor out of evil or with evil intention, therefore, but by accident, being impelled by good. And so on elsewhere.
(References: 1 Kings 6:10; Ezekiel 37:16-17)
 In an opposite sense, however, wood symbolizes something evil or cursed. So for example, they made graven images out of wood and worshiped them (Deuteronomy 4:23-28; Isaiah 37:19; 40:20; Jeremiah 10:3, 8; Ezekiel 20:32). Also, being hanged fromatree wasacurse (Deuteronomy 21:22-23).
That ivory symbolizes natural truth can be seen moreover from passages which mention ivory, such as Ezekiel 27:6, 15; Amos 3:15; 6:4; Psalms 45:8.
1. Thyine wood has not been identified. It has been associated with citron wood, and also with scented wood in general.
(References: Ezekiel 37:16-17; Revelation 18:12)
Apocalypse Revealed 753, 775